> Resource > iPhone > Sida loo View Messags masaxay on iPhone 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Sidee baad u arkaan tirtiray fariin ku iPhone ah?
Haddii aad rabto in aad si ay u helaan oo akhriyaan farriimaha iPhone tirtiray, aad u yimaadeen inay meel sax ah. Next, waxaan kuu socon doonaa iyada oo sida si ay u helaan oo u aragto fariimaha tirtiray aad iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4 ama iPhone 3GS. Waxaa jira laba siyaabood oo aad doorato, waayo, akhri fariimaha tirtiray kaga imaanayo iPhone iyo si toos ah u akhri fariimaha tirtiray on iPhone.
Ka hor tegista iyo akhriska tirtiray iPhone SMS
Sida aad ogtahay, farriimo tirtiray ayaa la waayay. Sida aad ka arki kartaa iyaga ku iPhone? Teknoolajiyada, marka aad la tirtiro xogta ku saabsan iPhone, xogta la kaliya sida tirtirka nidaamka calaamadeeyay oo qarsoon, si aad u arki kari maayo. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u soo ceshano karo oo akhriyey leh qalab kabashada ku haboon. Sidoo kale, haddii aad leedahay raad raac Lugood ah, aad u soo saaro karo iyo fariimaha qoraalka ah ee aad tirtiray on iPhone ku arkaan. Guud ahaan, waxaad u baahan tahay inaad hesho qalab iPhone kabashada macluumaadka ka hor inta aanad u helaan oo akhriyaan farriimaha la tirtiro. Wax fikrad ah oo ku saabsan? Halkan waa talo: Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Mac) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery for Windows) . Ama iyaga ka mid ah oo awood kuu siinaya in ay akhriyaan farriimaha qoraalka ah ee la tirtiro iPhone ee labada sheegnay. Download version maxkamadda hoose si uu u siiyo isku day ah oo hore.
2 siyaabaha ay u akhriyaan farriimaha tirtiray on iPhone ah
Xalka 1: Sida loo helo iyo aragtida tirtiray fariimo toos ah oo ku saabsan iPhone ah
Xalka 2: Sida loo akhriyo fariimaha qoraalka ah kaga imaanayo iPhone ah
Tallaabada 1. Ku rakib iyo orod
Ka dib markii ay soo degsado barnaamijka, waxaa loo soo dajiyo on your computer. Waxaa jira luqadood oo kala duwan si aad u doorato ka. Just soo qaado mid ka mid ah adiga kugu haboon. Marka la rakibo la dhamaystiro, si fudud u laban laabo guji icon ku desktop-ka si ay u maamulaan. Markaas xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka.
Haddii aad isticmaasho iPhone 5S / 5C / 5 / 4s, aad arki doonaa suuqa kala barnaamijka hoose.
Haddii aad isticmaasho iPhone 4 / 3GS, suuqa kala barnaamijka waa in sidan oo kale:
Tallaabada 2. Sawirka aad iPhone oo ay helaan farriimaha la tirtiro
Waa fududahay iPhone 5S / 5C / 5 / 4s isticmaala, waxaad bilaabi kartaa aad ka baareyso iPhone si fudud adigoo gujinaya ku Start Scan button on suuqa kala kor ku xusan. Dadka isticmaala iPhone 4 / 3GS, in waxoogaa ay adag tahay. Waxaad u baahan tahay si aad u hesho hab iskaanka ka iPhone ayaa ka hor inta aadan iskaan. Just socda sharaxa si adag hoos ku qoran oo si taxadar leh ku samayn:
Hay iPhone 4 / 3GS iyo riix Start button on dariishaddii Wondershare Dr.Fone ee macruufka.
Hel button Home iyo button Power u riixriixan oo waqti isku mid ah, marka aad bilowday tallaabada ugu horraysa ee, oo xajiya u saxda ah 10 ilbiriqsi.
10 ilbiriqsi ka dib, sii daayo button Power iyo sii riixaya badhanka Home for kale 15 ilbiriqsi. Marka aad u sheegay in aad ku soo gashay hab iskaanka ah, aad u sii daayo karo. Waqtigaas, barnaamijka si toos ah u bilaabi doonto aad ka baareyso iPhone sida soo socota.
Tallaabada 3. Check iyo fariimaha tirtiray iPhone u arkaan
Iskaanka ayaa aad u isticmaaleyso in yar. Sida xaqiiqadu, waxaad bilaabi kartaa previewing xogta laga helay aad iPhone waqtiga sawirka. Dooro Messages dhinaca bidix ee barnaamijka. Waxaad ka akhrisan kartaa fariimaha oo dhan, loo dhan yahay ee fariimaha iyo kuwa hadda jira ee aad iPhone tirtiray.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad iyaga ku badbaadin on your computer, fadlan iibsato liisan si aad u bilowdo barnaamijkii ugu horreeyay. Ka dibna riix kartaa Ladnaansho button rukun oo hoose u leedahay inaad hesho iyagii u badbaadiyey.
Tallaabada 1. Dooro habka soo kabasho iyo file ah oo gurmad ah
By isticmaalaya habkan, ma aha in aad u baahan tahay in ay ku xidhmaan aad iPhone in kombiyuutarka. Riix soo kabsado Lugood ee kaabta File on sare ee suuqa kala weyn ka dib kuu soo ordi barnaamijka. Markaasaa Lugood aad files gurmad si toos ah laga heli doonaa oo soo bandhigay idinka soo hor jeedda. Dooro mid ka mid ah si aad u iPhone haddii ay jiraan wax ka badan hal, iyo riix Start Scan button in uu horay u socdo.
Tallaabada 2. View Farriinta tirtiray iPhone
Scan kaliya ee aad qaadan doontaa dhowr ilbidhiqsi. Ka dib markii in, waxaad dooran kartaa qaybta Messages on menu. Markaas waxaad ka akhrisan kartaa oo dhan content fariin in gurmad ah. Sida aad u akhriyi aad iPhone.
Fiiro gaar ah: Waxaad u baahan tahay si aad u bilowdo barnaamijka haddii aad jeceshahay in aad badbaadin fariimaha on your computer sida file a akhrin karo.
Download version maxkamad la'aanta ah ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka hoose si aad u leeyihiin isku day ah oo hadda.